CAJIIB: Markii Hore Gary Neville, Haddana Charlie Adam Oo Dib U Cunay Erayadii Uu Ku Eedeeyay Shaqiri Iyo Waxa Uu Ka Yidhi Xaaladiisa Liverpool. - Gool24.Net
CAJIIB: Markii Hore Gary Neville, Haddana Charlie Adam Oo Dib U Cunay Erayadii Uu Ku Eedeeyay Shaqiri Iyo Waxa Uu Ka Yidhi Xaaladiisa Liverpool.
Xidiga kooda Liverpool ee Xherdan Shaqiri ayaa eedayn badan kula kulmay in kooxdiisii hore ee Stoke City ay heerka labaad u dhacday waxaana dadkii sida wayn saxaafada uga eedeeyay Shaqiri ka mid ahaa Gary Neville iyo xidigii ay Shaqiri isku kooxda ahaayeen Charlie Adam.
Shaqiri ayaa Liverpool ugu soo biiray 13 milyan gini kadib markii uu ka soo booday markabkii degay ee Stoke City taas oo uu Charlie Adam eedayn kulul saxaafada u mariyay Shaqiri laakiin qaabkii uu Gary Neville u liqay eedayntii uu Shaqiri u soo jeediyay ayuu markale Charlie Adam erayadiisii cunay.
Shaqiri ayaa markii uu eedaymo badan kala kulmay xidigii hore ee ay isku kooxda ahaayeen ee Charlie Adam waxa uu ugu danbayn ugu jawaabay erayo ay ka mid ahaayeen ” “Anigu waan ogahay in gabi ahaanba wixii uu sheegay uu qalad yahay, sababtoo ah markaas halkaas ayaan ka ciyaarayay, khaas ahaan markii uu waqtigu adkaa halkaas ayaan joogay waxaanan dhalinayay goolal badan”.
“Anigu waxaan ahaa midkii kaliya ee kooxda goolal ku caawinayay kulamadii adkaa, isaguna waxa uu ahaa ninkii kaadhka cas qaatay kulankii horyaalka ee muhiimka ahaa (Everton) wuxuuna qasaariyay rekoodhe (kulankii Brighton)” ayuu Shaqiri oo Adam iska difaacayay saxaafada u sheegay.
Ugu danbayn Adam ayaa sidii Gary Neville ka soo laabtay eedayntii uu u soo jeedinayay Shaqiri kadib markii uu arkay xidiga reer Switzerland oo Klopp ku qasbay in uu shaxdiisa ku soo daray kadib markii uu 2 gool iyo 4 gool caawin ka soo sameeyay 9 kii kulan ee uu soo saftay Premier league xili ciyaareedkan.
Charlie Adam oo qiranaya in uu ku qaldanaa eedayntii Shaqiri ayaa yidhi: ‘Dhegaysta isagu waxa uu leeyahay hibo layaableh, isla markaana waxay ugu dhawaan ciyaartiisu ku haboon tahay kooxaha waa wayn iyo la ciyaarista ciyaartoyda ka fiican”.
Charlie Adam oo si layaableh qirasho u samaya ayaa yidhi: “Ka warqabka baas qaadashadiisa iyo wax arkida ayna ciyaartoyda kale arag, waxay ugu dhawaan tahay in aanan anagu (Stoke) haysan ciyaartoy heerkiisa ahayd”.
Intaa kadib Charlie Adam ayaa sabab u raadiyay eedayntii uu hore Shaqiri ugu jeediyay wuxuuna yidhi: “Anigu waan eedeeyay isaga, sababtoo ah, waxaan dareemay in markii aanu ku jirnay dagaalka Eyga in aanu ugu dhawaan u baahnayn nooc dabeecad gaar ah, Jon Walters, Glen Whelen waxay ahaayeen nooca dabeecadaha aanu u baahnayn”.
Ugu danbayn Charlie Adam ayaa sii amaanay Shaqiri wuxuuna yidhi: “Ninka yari waxa uu awood u leeyahay in uu goolal ka dhaliyo wax aan jirin, laakiin kalsoonida ayaa nagu yarayd, isla markaana qofna awoodaas kumuu qaadi karin iyada oo ayna ku jirin dhinaca kale ee ciyaartu”.